Tsy maintsy hidirana ny fialana amin’ny fihibohana fa ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana no mila atao matotra kokoa. Anelanelan’ny fantsika sy maritoa isika, hoy izy. Asio fanetren-tena fa tsy hirehareha amin’ny afrika hoe sangany kanefa ny firenena entinao aza faha 4 amin’ny mahantra. Tsy andron’ny propagandy intsony izao fa ny aretina no iadiana. Nikabary izao ny filoham-pirenena farany teo dia mbola nilaozany nanenjika an-dRavalomanana. Fa maninona no atao adina “maternelle” toy izany foana? Mizotra any amin’ny fipoahana ara-tsosialy izao, hoy izy, ka miantso ny filoham-pirenena aho fa raha fanetren-tena no andrasan’ny vahoaka aminy kanefa mbola fieboeboana no ataony dia hipoaka io. Ilay stratejian-tseraseran’ny fitondrana sy ny fandaniam-bola no hitako tena nipetrahan’ny olana hatreto, hoy izy. Mifanandrify amin’ny fangatahan’ny vahoaka ve ny fanapahan-kevitra ? Fanontaniana no apetrako io, hoy hatrany i Mahery Lanto Manandafy.